Vaovao - Ny ankamaroan'ny fonosana dia vita amin'ny vera na acrylic？
Ny ankamaroan'ny fonosana dia vita amin'ny vera na acrylic. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahita marika kosmetika marobe hatrany isika teny an-tsena tamin'ny fampiasana tavoahangy lotion ho an'ny biby fiompy.
Ka maninona no malaza be ny fonosana lotion biby? Voalohany indrindra, ny tavoahangy vera na acrylic lotion dia mavesatra loatra, ary ny lanjany dia tsy mitarika amin'ny fanatanterahana azy. Rehefa mandeha lavitra kokoa ny tanora, dia mora kokoa ny mitondra ilay fonosana tavoahangy fanosotra ho an'ny biby. Azo entina ihany koa izy io. Faharoa, miaraka amin'ny fiakaran'ny fiantsenana an-tserasera, matetika ny tavoahangin-menaka fanosotra ary ny toe-javatra hafa mandritra ny fitaterana, raha toa ka vaky tsara ny tavoahangy fanosotra amin'ny alikaola ary ny fifandonana sy ny fihoaram-pefy mandritra ny fitaterana dia tsy hiteraka olana toy ny fahatapahana sy ny fivoahan'ny rano.
Averina indray, ny fonosana tavoahangy fanosotra menaka dia tsotra ihany no hamokarana ary ambany ny vidiny, noho izany dia malaza ihany koa izy io. Inona avy ireo olana tokony hojereko rehefa fonosana? Ny voalohany dia hoe fitaovana vaovao ve ny fitaovana. Ny mpanamboatra famolavolana plastika sasany dia hampiasa ny fitaovana faharoa hanodinana ny tavoahangy fanosotra ho an'ny biby, izay miharihary fa misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny emulsion. Noho izany dia mila jerena manokana ireo akora novokarin'ny mpanamboatra tavoahangy fanosotra. Amin'ny vidiny faharoa, ny tavoahangy fanosotra dia ampiasaina betsaka, noho izany dia mila mifehy ny vidiny araka izay azo atao ianao rehefa manafatra. Noho izany, amin'ny fizotry ny fividianana entana dia tokony hiezaka ny farany vitantsika mba hampitaha ny vidiny. Ny fahatelo dia ny fitoniana amin'ny famatsiana ireo mpanamboatra fonosana tavoahangy emulsion, ary ny fandefasana ara-potoana dia zava-dehibe ihany koa amin'ny faran'ny faran'ny mpanamboatra emulsion. . Amin'ny ankapobeny, ny fonosana lotion ho an'ny biby fiompy dia manana tombony maro ary manana tanjaka fampandrosoana matanjaka sy fifaninanana eo amin'ny tsena.
Fotoana fandefasana: Sep-15-2020
Fonosana kosmetika vita amin'ny tavoahangy, Kaontenera vovoka kosmetika miaraka amin'ny sivana, Tavoahangy fanosotra kosmetika, Kaontenera fanosotra kosmetika, Tavoahangy fanosotra amin'ny maso, Polonina tavoahangy mainty,